xmlns:fb="https://www.facebook.com/2008/fbml"> Voice Of Myanmar: သတင်းဌာနတွေ ကိုယ့်တာဝန်တွေနဲ့ အခန်းကဏ္ဍတွေ ကျေပွန်ဖို့ လိုနေပါသေးသည်
ကြားဖြတ်ရေးကောက်ပွဲမှာ မဲဆန္ဒနယ် ၄၈ ခုရှိပြီး ပါတီပေါင်း ၁၄ ပါတီဟာ ၀င်ပြီး အရွေးခံကြ မည်။ ဒီတော့ ဒီရွေးကောက်ပွဲနဲ.ပတ်သက်ပြီး သတင်းပေးတဲ့အခါ လူထုကို အသိပေးတဲ့အခါ ကျယ်ကျယ်ပြန်ပြန်.နဲ. မျှမျှတတ ဖြစ်ဖို.လဲ လိုပါသည်။
ပါတီ ၁ခု ၂ခုကိုပဲ ဦးစားပေး မီးမောင်း ထိုးပြ သတင်းတွေ ရေးကျ ဓာတ်ပုံတွေ ဖော်ပြကျတာ စာနယ်ဇင်းသမားတွေအနေဖြင့် ကိုယ့် အလုပ်ကို ကိုယ်လုပ်နေတာရော ဟုတ်ရဲ့လား။ သေခြာ စဉ်းစားဖို. လိုပါသည်။ လူထုကို မှန်မှန် ကန်ကန်နဲ. သတင်းပေးရမည့် အသိပေးရမည်။ သတင်းသမားတွေက တခြားနိုင်ငံမှာလို Paparazzi တွေလို နာမည်ကြီး ပေါ်ပြူလာဖြစ်တဲ့သူတွေနောက် တကောက်ကောက်လိုက်ပြီး ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီး သတင်းရေးခြင်းဟာ အကျင့်သီလနဲ. ပြည်.၀တဲ့ စာနယ်ဇင်းသမားတွေ၏ အလုပ် မဟုတ်ပဲ ခပ်ညံ့ညံ့ Yellow Journalism တွေသာ လုပ်တဲ့အရာဆိုတာ သတိထားဖို. လိုပါသည်။ ကိုယ့်အဆင့်ဟာ အဲဒီထက် မြင့်သင့်ပါသည်။
ဖြစ်သင့်တာက မဲဆန္ဒနယ် ၄၈ ခုလုံးကို တခုချင်းစီအလိုက် ပါဝင်ရှင်ပြိုင်ရမည့် အမတ်လောင်း တွေ ပါတီတွေ၏ နောက်ခံအကြောင်းနဲ. သက်ဆိုင်ရာ မဲဆန္ဒနယ်မြေ၏ လိုအပ်ချက်တွေ ထူး ခြားချက်တွေကို စနစ်တကျလေ့လာပြီး လူထုကို အမှန်တိုင်းသိအောင် လုပ်ပေးဖို. လိုပါသည်။ ဘယ် မဲဆန္ဒနယ်မှာ ဘယ်ပါတီတွေ ပြိုင်ကျမယ်။ ဘယ်သူတွေ ပြိုင်ကျမယ်။ သူတို. တဦးချင်း စီ၏ ထူးခြားတဲ့ ကွဲပြားတဲ့ အရည်အချင်းနဲ. နိုင်ငံရေးသမိုင်းကြောင်းလေး တွေကို အနည်းဆုံး အကျဉ်းချုံးပြီး ဖော်ပြရင် အဲဒီ မဲဆန္ဒနယ်မှာ ဘယ်ပါတီတွေဟာ ရှေ.ကနေ တစ် ပြေးနေတဲ့ အလားအလာရှိတဲ့ပါတီတွေဆိုတာ လူထုတွေ မဲပေး မရွေးချယ်ခင်မှာ သတင်းဌာနတွေက သိရှိအောင် အသိပေးသင့်ပါသည်။ ဖော်ထုတ်သင့်ပါသည်။ ဒေသခံတွေ၏ လူမျိုးရေး စီးပွား ရေး နိုင်ငံရေး လူမှုရေး ထူးခြားချက်တွေနဲ. ကွဲပြားချက်တွေကိုလဲ ထောက်ပြပြီး ဘယ်ပါတီ ဘယ်ကိုယ်စားလှယ်တွေကတော့ ဒေသခံတွေ၏ အကျိုးနဲ. လိုအပ်ချက်တွေကို အနီးစပ်ဆုံး ထင်ဟပ်ပေါ်လွန်နေ ကိုယ်စားပြုမှု ထောက်ခံမှု အများဆုံး ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာ မဲဆန္ဒနယ်မြေ အလိုက် ခွဲခြားလေ့လာ သုံးသပ်ပြဖို. လိုပါသည်။
ရက်ပေါင်း ၄၀ ကျော် ကျန်သေးတာမို. သတင်းဌာနတွေအဖြင့် မဲဆန္ဒနယ် တခုချင်းအလိုက် စနစ်တကျ လေ့လာ တင်ပြမယ်ဆိုရင် အချိန် ရပါသေးသည်။ လူထုတွေ ပိုပြီး တိတိကျကျ သိရှိခွင့်ရအောင် ကူညီနိုင်ပါသည်။ ဒါမျိုး လုပ်ဖို. လိုပါသည်။ အဲဒီလို မဟုတ်ပဲ မဲဆန္ဒနယ် တချို.နဲ. နာမည်ကြီးတဲ့သူတွေလောက်ပဲ သတင်းရေးမယ် သတင်းပေးမယ်ဆိုရင်တော့ စာ နယ်ဇင်းသမားတွေ၏ တာဝန် မကျေပြွန်နိုင်ပါ။ ကျယ်ကျယ်ပြန်.ပြန်.နဲ. သတင်းပေးရမှာ အသိပေးရမှာက သတင်းဌာနတွေ၏ အလုပ်ပါ။ မဲဆွယ်စည်းရုံးတာက နိုင်ငံရေး ပါတီတွေနဲ. အမတ်လောင်းတွေ၏ အလုပ်ပါ။ သူ.အလုပ် သူလုပ်ပါစေ။ ကိုယ့်အလုပ် ကိုယ်လုပ်မိဖို. လိုပါ သည်။
High Profile တွေ မရောက်တာနဲ. အဲဒီ မဲဆန္ဒနယ်မြေတွေအကြောင်း သတင်းမရေး တာမျိုး မဖြစ်သင့်ပါ။ မဲဆန္ဒနယ်မြေတိုင်း နေရာတိုင်းဟာ သူ.ဟာနဲ.သူ အရေးကြီးပါသည်။ လူတွေ သိဖို. လိုပါသည်။ ဒါကို သတင်းဌာနတွေက လုပ်ပေးရမည့် တာဝန်ရှိပါသည်။ အခု တော့ ဘုန်ကြီးတပါး နယ်နင်ခံရတဲ့အကြောင်း ကျောင်းပြောင်းရတဲ့သတင်းကတောင် အကြိမ် ကြိမ် အသံလွှင့်တာတွေ မေးမြန်းတာတွေရှိခဲ့ပေမည့် တချို. မဲဆန္ဒနယ်မြေတွေမှာ ဘာ တခွန်းမှ ဘာအသံမှ မထွက်တာ မရေးတာတွေဟာ သိပ်ပြီးတော့ ဟန်မကျလှပါ--
အခုဆိုရင် မဲဆန္ဒနယ် ၄၈ ခုမှာ ပြည်သူတွေ ဘယ်နှစ်ခုလောက်များ ကောင်းကောင်း သိပါ သလဲ။ ၀င်ပြိုင်တဲ့ ပါတီ ၁၄ ခုထဲမှာ ပါတီ ဘယ်နှစ်ခုလောက်ပဲ လူတွေ နာမည် ကြားဖူးပါ သလဲ။ အမတ်လောင်းအဖြစ် ၀င်ပြိုင်တဲ့သူတွေအကြောင်းရော လူတွေ ဘယ်လောက် ကောင်း ကောင်း သိခွင့်ရရှိနေပါသလဲ---အဖြေက ရှင်းရှင်းလေးပါ--ဘာမှ များများစားစား မသိကျပါ။ ဒီလိုအပ်ချက်ကို ဖြည့်စည်းပေးရမယ် အသိပေးရမည့်သူတွေဟာ သတင်းသမားတွေ၏ အလုပ် ပါ။ ပါတီတွေအကြောင်း အမတ်လောင်းတွေအကြောင်းကို သက်ဆိုင်ရာ ပါတီတွေက ပြော တာလောက်နဲ.မလုံလောက်ပါ--ဒီထက် ပိုပြီး လူထုတွေက သိဖို. လိုပါသည်။ ထောက်ပြ ယှဉ် ပြ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပြဖို. လိုပါသည်။ လူထုတွေက မဲ ပေး မရွေးချယ်ခင်မှာ လူထုတွေဆီမှာ သတင်းအချက်အလက် အမှန်အကန်တွေ သိရှိထားဖို. သတင်းဌာနတွေက ကူညီရမည် မဟုတ်ပါလား။ ပြောရရင် လူထုတွေ အလိမ်မခံရအောင် သတင်းပေး အသိပေး ရှင်းပြပေးရမှာ က သတင်းသမားတွေ၏ အလုပ် မဟုတ်ပါလား။
ဒါကြောင့် ကျန်နေသေးတဲ့အချိန်တွေမှာ လူထုကို ပါတီတွေအကြောင်း မဲဆန္ဒနယ်မြေတွေ အ ကြောင်း အမတ်လောင်းတွေ၏အကြောင်းတွေကို ဖက်ပေါင်းစုံ ရှုဒေါင့်စုံနဲ. အမြင်စုံ သဘော ထားစုံတွေကို လေ့လာ စုံစမ်းပြီး ပြည်သူတွေ သိအောင် အသိပေးဖို. သတင်းပေးဖို. ဘက် လက်မှု မရှိပဲ မျှမျှတတနဲ. အမှန်အတိုင်း သတင်းပေးဖို. အထူး လိုနေပါသည်။
အခုတော့ သတင်းဌာနတွေဟာ Home works လုပ်ပုံ သိပ်မရပါ။ Research and Ground work မလုပ်ကြပါ-- အလွယ်ရတာကို ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီး တင်လိုက်တာနဲ. သတင်းဖြစ်နေပြီလို. ထင်နေတဲ့ ပါပရဇီအဆင့်တွေက အများကြီးတွေ.နေသေးပါသည်။
ကိုယ့်အလုပ်ကိုယ် တာဝန် ကျေဖို. လိုပါသည်။ ကိုယ့်သိက္ခာနဲ. ကိုယ့်ကျင့်ဝတ်ကို ညီအောင် ထိမ်းဖို. လိုပါသေးသည်။ မဟုတ်ရင် ခြံဝမှာ အဟောက်ခံရတာ မလေးမစား အဆက်ဆံခံရတာမျိုးတွေ ဒီထက် တိုးလာ နိုင်ပါသည်။ ကိုယ့်အလုပ်ကို ကိုယ်လုပ်ပြီး ကိုယ့်သိက္ခာကို ကိုယ် ကာကွယ်ဖို. လိုပါသည်။ ။